टेलिकमको तिज उपहार, शुभरात्रि प्याकेज
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले चाडपर्वको अवसरमा जिएसएम प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुका लागि शुभरात्री प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको छ । यो अफर राति ११ बजेदेखि विहान ५ बजेसम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ । ठूला चाडपर्वको अवसरमा घोषित यो अफर आगामी भदौ १८ गतदेखि १५ दिनसम्मका लागि लागू हुने नेपाल टेलिकमले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । यो...
केयर रेटिङसँगको साझेदारीमा नेपालमा स्थापना हुने भो अर्को क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी
काठमाण्डौ । नेपालमा रहेको एक मात्र क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालको एकाधिकार तोडिने भएको छ । एकमात्र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी हुँदाका कठिनाईहरुबाट वाक्क बनेका व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा कम्पनीहरुको हितलाई ध्यानमा राखेर नयाँ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी स्थापनाको प्रयास थालिएको हो । बुधबार भारतमा प्रख्यात केयर रेटिङसँग साझेदारी गरी...
शिवम् सिमेन्टको पर्व अफर, ग्राहकलाई ‘चाँदी नै चाँदी’
काठमाण्डौ । देशको अग्रणी सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी शिवम् सिमेन्ट लिमीटेडले नजिकिँदै गरेको दशैं, तिहार र छैठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदी नै चाँदी’को विशेष अफर सार्वजनिक गरेको छ । यो अफर अन्तर्गत प्रत्येक ४० बोरा सिमेन्टको खरीदमा ‘लक्ष्मी–गणेश’ अंकित चाँदीको सिक्का ग्राहकले अनिवार्य रुपमा उपहार पाउनेछ । यो योजना सीमित स्टकका लागि...
बुबाको मुख हेर्ने दिन टेलिकमको उपहार, डाटा प्याकमा सहुलियत
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले जिएसएम प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुका लागि बुबाको मुख हेर्ने दिनको अवसरमा शुभ विहानी–सन्ध्या डाटा प्याक अफर ल्याउने भएको छ । सो अफर विहान ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म र साँझ ३ बजेदेखि ७ बजेसम्म प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । यो अवसरमा टेलिकमले १ सय एमबीको डाटा भोल्यूम ४५ रुपैयाँ(...
जातीयता र क्षेत्रीयताको आगो सल्किएको भन्दै सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अधिवेशन अढाई महिनाका लागि स्थगित
काठमाण्डौ । अध्यक्षका दुई प्रत्यासी नेतृत्वको प्यानलले खुलेआम लाखौं खर्च गरी जातीयता र क्षेत्रीयताको आगो सल्काएर संगठन नै तहसनहस पार्न खोजेको भन्दै भदौै २५ र २६ गतेका लागि तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको चौथो साधारणसभा तथा दोश्रो महाधिवेशन अचानक स्थगित गरिएको छ । दुई प्यानलले जिल्ला तथा नगर क्षेत्रको दौड सके पनि चुनावी...
देशमै पहिलोपटक दुई जलविद्युत कम्पनीबीच मर्जर हुने !
काठमाण्डौ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाबबीच मर्जरको लहर चलिरहेको बेला देशमै पहिलोपटक दुई जलविद्युत कम्पनीबीच मर्जर हुने भएको छ । एकाघर समूह प्रोमोटर रहेका अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र अरुण कावेली पावर लिमिटेड एकापसमा मर्ज हुने भएका हुन् । अरुण कावेलीको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अरुण भ्यालीसँग...
जगदम्बा स्टिल्सले ल्यायो ‘राइनो ५०० डी’, नेपालकै गुणस्तरीय फलामे छड भएको दाबी
काठमाण्डौ । सात सय मिलियन अमेरिकी डलर कारोबार रहेको शंकर गु्रप अन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्स प्रालिले नेपाली बजारमा ‘ग्यारेण्टेड डक्टिलिटी’सहितको 'राइनो ५००डी' फलामे छड सार्वजनिक गरेको छ । 'राइनो ५००डी' मजबुती तथा डक्टिलिटी सहितको नयाँ छड हो । उत्पादन प्रक्रिया, भौतिक तथा रासायनिक गुणको समीश्रण लगायत कारणले यो छड बजारमा उपलब्ध...
एनसेल लगातार चौथो पटक पनि देशकै ठूलो करदाता बन्ने भो !
काठमाण्डौ । लगातार तीनपटक सर्वोत्कृष्ट करदाताको उपाधि हात पारिसकेको एनसेलले चौथौ पटक पनि यो उपाधि हात पार्ने निश्चित भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६९/०७०, २०७०/०७१ र २०७१/०७२ मा लगातार तीनपटक सबैभन्दा बढी कर तिर्दै सर्वोत्कृष्ट करदाता बनिसकेको छ । एक सरकारी अधिकारीका अनुसार एनसेलले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु २८ अर्बभन्दा बढी...
अग्रवाल सेवा केन्द्रमा महेशकुमारको नेतृत्व
काठमाण्डौ । अग्रवाल सेवा केन्द्रले ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी महेशकुमार अग्रवालको अध्यक्षतामा सम्पूर्ण कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरिएको हो । सेवा केन्द्रको निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल रहेका छन् । तीन उपाध्यक्षमा गिरिधारी अग्रवाल(लोहिया), किशोरकुमार...
फोरजी सेवा संचालन गर्न एनसेल तयार !
काठमाण्डौ । इन्टरनेट सेवाको माग र ग्राहक संख्या बढिरहेको अवस्थामा एनसेलले यो वर्ष डाटा सेवामा विषेश ध्यान केन्द्रीत गर्ने स्पष्ट पारेको छ । एनसेलद्वारा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक साईमन पर्किन्सले सो कुरा बताएका हुन् । पर्किन्सले भने–‘यो वर्ष डाटा सेवामा थप सुधार गर्नु कम्पनीकोे पहिलो...
विकट ३ जिल्लामा टेलिकमको माइक्रोवेभ रेडियो लिङ्क, प्रविधिको क्षेत्रमा ऐतिहासिक कोशेढुंगा बन्ने दाबी
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले यही भदौ ४ गतेदेखि ७५ वटै जिल्लामा माइक्रोवेभ रेडियो लिंकको पहुँच पुर्याई सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ । त्यसअघि विशेषगरी कर्णाली अञ्चलका मुगु, हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका सदरमुकामहरुमा स्याटेलाइट प्रविधि मार्फत सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको र सेवा उपभोगका सन्दर्भमा विभिन्न कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको...
नेपाल सिल्क रोड चेम्बर अफ कमर्स परिषदको गठन
काठमाण्डौ । चीन सरकारबाट अगाडि ल्याइएको पुरानो सिल्क रोड पुनः सुचारु गरी "One Belt One Road" अवधारणालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघले डा. राजेशकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय नेपाल सिल्क रोड चेम्बर अफ कमर्स परिषद गठन गरेको छ । नेपाल सिल्क रोडको अवधारणामा सहभागी हुने भएपछि सिल्क रोडको महत्वलाई ध्यानमा राखी सिल्क...
एनसेलको चासो मोवाइल फाइनान्सियल सेवामा, मोवाइलबाटै पैसा पठाउन र पाउन सकिने
काठमाण्डौ । एनसेलले आफ्नो सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रको दायरा बढाउँदै मोबाइल फाइनान्सियल सर्भिसहरु पनि ल्याउने बताएको छ । एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साईमन पर्किन्सले कम्पनीको नयाँ लोगो अनावरण गर्दै मंगलबार एक कार्यक्रम माझ सो कुरा बताएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बंैकले केही समय अगाडि मोबाइल फाइनान्सियल सर्भिसहरु ग्राहकलाई प्रदान...
विद्युत आयोजनाहरु भद्रगोल, प्राधिकरण वर्षेनी घाटामा !
►रमेश लम्साल काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री’ लगायतका आयोजना निर्माणको अन्तिमचरणमा पुगेको बताउँदै आएको छ । तर ती आयोजना कहिले र कति लागतमा सम्पन्न हुने भन्ने बारेमा हालसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । प्राधिकरणको दायित्व बढ्दै गएको छ । ऊर्जा संकटका...
असोज ७–११ गते चेम्बर एक्स्पोको दोश्रो संस्करण
काठमाण्डौ । वाणिज्य मन्त्रालय एवम् व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको सहकार्यमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ‘नेपाल चेम्बर एक्स्पो’को दोश्रो संस्करण आयोजना गर्ने भएको छ । गत वर्ष नेपाल चेम्बर एक्स्पोको पहिलो संस्करण आयोजना गरेको यो संस्थाले आगामी असोज ७ देखि ११ गतेसम्म काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा दोश्रो...